Nexus6နှင့် LG G3 တို့၊ သင်ဆုံးဖြတ်ရန်အချက်အလက်များအားလုံးကိုပေးသည် Androidsis
Francisco Ruiz | | LG, ကို Nexus
ဒီနေ့၏သတင်းဖြတ်သန်းကြောင်းသံသယမရှိပါ Motorola Nexus6သစ်ကိုစတင်မိတ်ဆက်, Nexus ဆိုလိုသောကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်ကိုစွန့်ခွာသွားသော Nexus မိသားစု၏ terminal အသစ်တစ်ခု ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောသူတို့၏တစ် ဦး terminal ကိုဖြစ်လာသည် «ပရီမီယံ» ကျွန်တော်တို့အများစုသည်မတတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းများဖြင့်ဖြစ်သည်။
Google Nexus အကွာအဝေး၏ယခုအနေအထားအသစ်တွင်ယခုကျွန်ုပ်တို့လုပ်တော့မည် Motorola Nexus6ကိုအခြားအလားတူဆိပ်ကမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း စျေးနှုန်းအားဖြင့်ဖြစ်စေ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအရဖြစ်စေသင်၏ဝယ်ယူမှုအတွက်အဘယ်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့။ ဒီကနေ့အလွန်ဆင်တူတဲ့ terminal နှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ချင်တယ်၊ တစ်ဖက်မှာ LG ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် terminal ကိုဒီ titans တွေကြားမှာရင်ဆိုင်ရမယ့် Nexus6အသစ် LG က G6 ကို Nexus 3.
Nexus6နှင့် LG G3 D855 နိုင်ငံတကာမော်ဒယ်များကိုနှိုင်းယှဉ်ခြင်း
Android ဗားရှင်း အန်းဒရွိုက် 5.0 Lollipop Android 4.4.2 ကို Android 5.0 Lollipop သို့အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သည်
ဖန်သားပြင် AMOLED 5'96 "QHD IPS 5'5 "QHD
စီပီယူ 805 Ghz တွင် Snapdragon2QuadCore 801'2Ghz တွင် Snapdragon5QuadCore
GPU ကို Adreno 420 Adreno 330
ရမ် 3Gb စျေးကွက်ပေါ် မူတည်၍2or 3Gb
ပြည်တွင်းသိမ်းဆည်းခြင်း 32 သို့မဟုတ် 64 Gb 16 သို့မဟုတ် 32 Gb Sdcard slot သည် 128Gb အထိရှိသည်။
အဓိကအခန်း ပုံရိပ်တည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူ 13 Mpx 13 Mpx လေဆာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော autofocus ပါရှိသည်
ရှေ့ကင်မရာ2Mpx 2.1 အမတ်
ဆက်သွယ်မှု LTE NFC ဘလူးတုသ် ၄.၀ Wifi GPS LTE NFC ဘလူးတုသ် ၄.၀ Wifi GPS
ဘက်ထရီ မဖြုတ်နိုင်သော 3220 mAh ဖယ်ရှားနိုင်သော 3000 mAh
အစီအမံ 159.26 82.98 10.06 မီလီမီတာ 146.3 74.6 8.9 မီလီမီတာ
အလေးချိန် 184 ဂရမ် 149 ဂရမ်
စြေး ယူရို ၅၀၀/၆၀၀ ယူရို ၅၀၀/၆၀၀
ပူးတွဲပါဇယားတွင် terminal နှစ်ခုစလုံး၏ကွာခြားချက်၊ ၎င်းတို့အရွယ်အစားသို့မဟုတ် terminal သို့သိုလှောင်မှုတိုးချဲ့ရန်ပြင်ပမှတ်ဉာဏ်ကဒ်များထားရှိခြင်းအပြင်ဘက်ထရီကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်အခြားသူများမှမည်သို့ကွာခြားသနည်း။ သူတို့ကအနည်းငယ်မျှသာခြားနားချက်များဖြစ်ကြသည် သူတို့နှစ် ဦး စလုံးအချို့ရှိသည်ကတည်းက အစွမ်းထက်ပရိုဆက်ဆာနှင့် GPUS ထက်ပို Android operating system ကိုလွယ်ကူစွာ run ရန်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းအကြောင်းပြောပါကတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအကြားကွာခြားချက်သည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွာခြားသည် ယူရို ၁၀၀ ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းနည်း အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာဝယ်သလဲ၊ သိသိသာသာခြားနားချက် သို့သော်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင်၏ဝယ်ယူမှုအဆင့်ကိုအကဲဖြတ်သင့်သည်။
Android operating system တွင်ထည့်သွင်းထားသောလုပ်ဆောင်ချက်များစွာပါ ၀ င်သည့်စီးပွားဖြစ်ဆော့ဖ်ဝဲအတွက်မူဤကိစ္စတွင်ဖြစ်သည် LG ၏ terminal သည် LG G3 ကိုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်Quick Remo, Quick Memo (သို့) Camera software ကဲ့သို့သော application များပါ ၀ င်သော terminal သည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအနိုင်ရသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Android ၏ဗားရှင်းအသစ်များသို့မွမ်းမံမှုများပြissueနာကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည် Google မှပိုင်ဆိုင်သည့် Nexus6၎င်းသည်ဤအသစ်ပြောင်းခြင်းများကိုအလိုအလျောက်ရရှိသည်နှင့်ချက်ချင်းထွက်ခွာသွားသည်နှင့်အမျှ LG ၏အသစ်ပြောင်းခြင်းမူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သိထားကြသည် Android 5.0 Lollipop သို့မွမ်းမံသွားမည်ဖြစ်သော်လည်းမည်သည့်အချိန်တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ရောက်ရှိမည်နည်း.
ဤအချက်အလက်များလက်ဝယ်ရောက်ရှိနေပြီဆိုလျှင်အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်သင်ဆုံးဖြတ်သည် အပေါငျးတို့သ PROS နှင့် CONS တက်အလေးချိန် ဤသည်နှစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှား Android terminal များကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်၊ သင်ဝယ်ယူမှုကောင်းကောင်းလုပ်တော့မယ်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » Nexus6နှင့် LG G3 နှိုင်းယှဉ်ချက်
အဲ့တာကကျွန်တော့်ရဲ့“ နှိုင်းယှဉ်မှု” ပါ။ G3 ကအနီအောက်ရောင်ခြည်နဲ့အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ 32 နဲ့ 3GB ဗားရှင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ အရွယ်အစားဟာအဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့အချက်ပဲ။ ၆ လက်မကလူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ဘူး၊ တကယ်တော့ဒါကလူနည်းစုစျေးကွက်လို့ထင်တယ်။
LG G3 စျေးကွက်ပေါက်စျေးမှာယူရို ၃၉၉ မှယူရို ၄၉၉ အထိရှိကာယူရို ၆၄၉ သို့ယူရို ၁၀၀ ဖြစ်သည်
LG G3 သည်သင်ဝယ်ယူသည့်နေရာပေါ်တွင် မူတည်၍ စျေးနှုန်းကွာခြားသည် Movistar ကသင့်ကိုယူရို ၃၈၄ ဖြင့်ချန်ထားသည်သင်စင်တာများ၌ဝယ်လျှင်, စဉ် အယ်လ်ကortInglésသည်ယူရို ၅၂၉ ဖြစ်သည်။ ငါပြောခဲ့သလိုပျမ်းမျှပြောချင်တာကစျေးက ၀ ယ်တဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားနိုင်တယ်။
Nexus6ကစျေးကွက်ထဲမှာမရှိသေးဘူးဆိုရင် LG ကင်မရာကပိုကောင်းတယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ \_ t
၎င်းသည် LG G5 ၏အမြွှာညီဖြစ်သည့် Nexus2ကဲ့သို့သောအခြား Nexus ဆိပ်ကမ်းများအပေါ်အခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Android နှင့် Google ထက်ကင်မရာအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော application ရှိသော်လည်းကောင်းမွန်သောဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ကူးသည်။ ကောင်းသောနှင့်မကောင်းတဲ့အလင်းအခြေအနေများတွင်နှစ် ဦး စလုံး။ ၎င်းသည် Android ကိုသန့်ရှင်းသော Nexus terminal များဖြစ်သော LG, Sony, Samsung သို့မဟုတ် HTC တို့ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီများ၏ဆိပ်ကမ်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအကြောင်းပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် application များနှင့် terminal ကိုထပ်တိုးတန်ဖိုးများပေးသောသီးသန့်လုပ်ဆောင်မှုအသစ်များနှင့်သီးခြားလုပ်ဆောင်မှုအသစ်များဖြစ်သည်။
အိုကေ ... ရှင်းပြချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ...
သင်၏ Android ဒေါင်းလုပ်အားလုံးကို Auto-Move ဖြင့်လွယ်ကူစွာစီမံပါ